Legit AliExpress? Famerenana amin'ny antsipiriany - Famerenana
Legit AliExpress? Famerenana amin'ny antsipiriany
AliExpress dia fivarotana an-tserasera ahafahanao mividy vokatra amin'ny vidiny mirary lavitra noho ny serivisy mitovy aminy. Ity fivarotana an-tserasera ity dia natsangana tamin'ny taona 2010 tany ho any ary Alibaba no fananana, izay orinasa marolafy Sinoa misy firenena maro mifantoka amin'ny e-varotra.
Ny ankamaroan'ny vokatra dia ara-dalàna, na dia mety misy fetrany aza. Afaka mitsambikina mora foana ianao amin'ny pejin'ny mpivarotra voalohany na mora indrindra hitanao ary afaka manantena vokatra avo lenta ianao avy eo. Misy fisafidianana vokatra mahatalanjona sasany ary mora vidy koa ho hitanao.
Azo antoka fa tsy ilay mpanome tolotra hosoka no eritreretin'ny olona sasany. Ny sasany amin'ireo marika sinoa toa an'i Huawei, Xiaomi, ary Baseus aza dia nanasongadina ny vokatr'izy ireo amin'ity magazay an-tserasera ity, miaraka amin'ireo orinasa kely an'arivony sy an'arivony maro hafa.
Zava-misy mahaliana mety tianao:
Whatsapp Statistics & zava-misy
Statistika Instagram (2020)
Ahoana ny fomba fiasan'ny AliExpress amin'ny ankapobeny?
Ny AliExpress dia miasa toy ny fivarotana an-tserasera hafa izay itadiavanao vokatra manokana, ary hasehon'ny tranonkala aminao ny safidy azo avy amin'ny mpivarotra maro.Azonao atao ny mahita fa ny ankamaroan'ny vokatra dia mizara ho sokajy isan-karazany toy ny entana fanatanjahan-tena, akanjo, hatsarana sy fahasalamana, elektronika ho an'ny mpanjifa, firavaka ary maro hafa.
Ity fivarotana an-tserasera ity dia alefa hatraiza hatraiza ary afaka mandoa amin'ny alàlan'ny ankamaroan'ny fomba fandoavam-bola iraisam-pirenena toy ny carte de crédit na debit, PayPal, transfer bank, Pioneer, sns.Raha hampiasa AliExpress, mila miverina maka kaonty maimaim-poana amin'ny tranokala AliExpress ofisialy aloha ianao.
Afaka mamorona kaonty vaovao fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fampidirana ny adiresy mailakao amin'ny endrika fisoratana anarana, na afaka miditra amin'ny kaonty Facebook na Google anao aza.Rehefa avy namorona ny kaontinao ianao, AliExpress dia hanontany anao ny anaranao sy ny anaranao farany, ny daty nahaterahanao, ny maha-lahy na vavy anao, ny zom-pirenanao, ary zavatra vitsivitsy hafa mety ho hitanao rehefa avy namorona kaonty ianao.
Iza no afaka mampiasa AliExpress?
Izay avy amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia afaka mampiasa AliExpress satria misokatra amin'ny mpampiasa rehetra izy io. Manome aza ny kinova amin'ny fiteny samihafa ao amin'ny tranokalany ary koa ny rindrambaiko finday toa ny anglisy, holandey, alemà, rosiana, espaniola, portogey, frantsay, tiorka, italianina, japoney, Thai, korean, vietnamiana, hebreo, arabo ary poloney.
Inona avy ireo zavatra azonao atao mba hividy amin'ny AliExpress?
Afaka mahita entana marobe amin'ny AliExpress ianao avy amin'ny lamaody lahy sy vavy, elektronika hatramin'ny vokatra volo sy hatsaran-tarehy, fanaka, firavaka, moto, ary na dia fiara aza.
Fa maninona no lafo daholo ny entana amin'ny AliExpress?
Ny ankamaroan'ny mpivarotra izay mivarotra ny vokatra ao amin'ny AliExpress dia miorina ao Shina ary mahazo ny vokatra rehetra avy amin'ny mpamokatra sinoa sasany. Izany dia mitazona ny vidiny ambany ary midika izany fa afaka manolotra fandefasana maimaim-poana na tena mora koa izy ireo fa tsy toy ny fivarotana an-tserasera hafa.
Azo antoka ve ny mividy amin'ny AliExpress?
Raha vantany vao namorona kaonty amin'ny AliExpress ianao dia hanomboka mizaha zavatra amin'ny AliExpress. Ho hitanao fa mora kokoa ireo entana rehetra eto amin'ity tranonkala ity ary mety hiteraka fanontaniana sy fisalasalana eo amin'ny vahoaka. Manontany tena ve ny ankamaroan'ny olona raha azo antoka ny mividy vokatra amin'ny AliExpress?
Raha ny marina, AliExpress dia sehatra azo antoka sy azo antoka hividianana vokatra avy. Rehefa hividy entana amin'ity magazay an-tserasera ity ianao dia tsy hanana safidy firy hifandray amin'ny mpivarotra, hahazo laharana fanaraha-maso, hanaraka ny vokatrao, ary avy eo dia afaka mahazo valiny feno amin'ireo entana tonga simba, tara, na aza tonga.
Saingy, rehefa miantsena amin'ny AliExpress ianao dia mila ho hendry kely. Ny iray amin'ireo antony mora ny vokatra amidiny dia satria mividy mivantana amin'ny mpanamboatra ianao, saingy misy antony hafa koa satria ny sasany amin'ireo entana dia sandoka.
Mba hisorohana ny vokatra sandoka toy izany dia mila mahazo antoka ianao fa manamarina ny hevitry ny vokatra avy amin'ny mpividy hafa ary koa manamarina ny naotin'ny mpivarotra amin'ny tranokala alohan'ny ividiananao zavatra amin'ny AliExpress.
Inona no azonao antenaina rehefa mampiasa AliExpress?
Adiresy sy fampahalalana momba ny fandoavam-bola:
AliExpress dia mitaky anao hanisy ny adiresy sy ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola mandritra ny fizarana fizarana ny kaomandinao voalohany. Raha vantany vao nampidirinao ny fampahalalana, dia ho tahirizina ao amin'ny kaontinao raha hampiasa anao isaky ny manafatra. Tsy toy ny fivarotana sasany mangataka anao hanampy adiresy fandefasana ary koa ny fomba fandoavam-bola amin'ny mombamomba anao rehefa manangana ny kaontinao fotsiny ianao.
Toerana tsy hita ao amin'ny menio:Ny sasany amin'ireo tanàna dia mety tsy hita ao amin'ny menio rehefa manandrana manampy ny adiresy ao amin'ny AliExpress ianao, saingy afaka miditra an-tanana ny anaran'ny tanàna amin'ny sehatry ny lahatsoratra ianao.
Vidiny mora kokoa:Rehefa miantsena amin'ny AliExpress ianao dia azonao atao ny manantena ny vokatra ho an'ny vidiny mora vidy kokoa noho ny mahazatra amin'ny fivarotana an-tserasera hafa.
Eny, ny fiantsenana amin'ny AliExpress dia azo antoka sy ara-dalàna. Na raha tsy izany, tsy ho iray amin'ireo fivarotana fivarotana an-tserasera be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao ity misy mpampiasa an-tapitrisany isan'andro.Ny fivarotana an-tserasera dia mahomby amin'ny fikirakirana baiko an-jatony sy an'arivony isan'andro, mandefa azy ireo manerana an'izao tontolo izao.
Ny fiarovana dia ampiharina ho azy amin'ny mpampiasa rehetra an'ity tranonkala ity. Eny, amin'ny maha-mpividy anao dia tsy mila manao zavatra fanampiny akory ianao. Raha mividy mivantana ny vokatra amin'ny alàlan'ny AliExpress ianao dia ho voaro ny vokatrao na inona na inona vidinao amin'ny magazay an-tserasera.
Ity fivarotana ity dia manaraka maodely e-varotra mahazatra. Rehefa hividy entana amin'ny serivisy ianao dia hahazo laharana fanaraha-maso, afaka manara-maso ny vokatrao, ary hahazo safidy iray izay hahafahanao mahazo famerenam-bola feno raha toa ka tonga simba ny entana, na tara , na raha tsy tonga mihitsy ireo entana.Alibaba Group no orinasan-trano misy azy izay ao ambadiky ny serivisy fiarovana Alibaba Cloud.
Ataovy ao an-tsainao fa na dia mety manampy anao hitahiry vola sy ezaka aza izy ireo dia misy tranokala toy ny AliExpress izay matetika miteraka ahiahy eo amin'ny mpividy. Naheno isika fa ireo vokatra izay amboarina ao Shina, amin'ny ankapobeny, dia manana ny lazany ho tsy tsara kalitao. Na izany aza, tsy marina izany amin'ny tranga rehetra. Mety hahazo zavatra vita tsara ihany aza ianao amin'ny vidiny mora kokoa noho ny mahazatra.
Azo antoka ve ny fampiasana Bluestacks amin'ny Windows 10?
Seho Anime 24 tsara indrindra amin'ny Netflix
Moa ve voamarina fa ho avy amin'ny taona 2022 ny Adventure Bizarre an'i Jojo: Ranomasimbe Vato Fizarana faha-6?
Te hahalala ny datin'ny famoahana ny Good Girls Season 4 ve ianao? Fantaro Eto!
mijery sarimihetsika anime an-tserasera subbed anglisy maimaim-poana
ianao ve no mpanao famotoana andiany 7
mahazo kaody karatra fanomezana maimaim-poana
tranokala mivantana mivantana mivantana amin'ny Internet
ahoana no ahazoana robux 1000
misintona minecraft tsy voasakana ao an-tsekoly
tranonkala mozika tsy voasakana